Hunhu - Hebei Weierli Animal Mishonga Yeboka Boka Co, Ltd.
Yedu mhando manejimendi manejimendi inosanganisira ese maficha ehunhu ane chekuita nezvivakwa, zvigadzirwa, uye sevhisi. Nekudaro, manejimendi manejimendi haana kungotarisa pane chigadzirwa uye sevhisi mhando, asi zvakare nzira dzekuzviwana.
Vatariri vedu vari kutevera iyo yakatsiga misimboti:
1. Mutengi Funga
2. Kunzwisisa izvozvi uye zvenguva yemberi zvinodiwa nevatengi ndizvo zvakakosha pakubudirira kwedu. Ndiyo mutemo wedu kusangana nezvinodiwa nevatengi uye kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vese.
Kurongeka Kwemhando yepamusoro
Kuvimbiswa kwemhando yepamusoro kunosanganisira kuvandudza uye kuita kwehurongwa hunopa chivimbo muhunhu hwechigadzirwa uye kuchengetedzeka. Izvo zvinoitwa kuburikidza neakarongwa uye neakarongeka zviitiko zvinoitwa mune yemhando system kuona kuti izvo zvinodikanwa zvekugadzirwa kwechigadzirwa zvazadzikiswa.
Kudzora kwemhando yepamusoro chiito chekudzora maitiro anoenderana nekugadzirwa kwechigadzirwa uye kuongorora mhando yechigadzirwa pamatanho akasiyana kubva pane zvakasvibirira kusvika kune yekupedzisira yakarongedzwa chigadzirwa inosvika kumutengi.